Biogesic Cool Feel - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Biogesic Cool Feel
Biogesic Cool Feel ဆိုတာ …
ကလေးငယျတှမှော ရာသီဥတုအကူးအပွောငျးကာလတှဟောဆိုရငျ အပူအအေးပွောငျးလဲမှုမွနျဆနျတဲ့အတှကျ အအေးမိလှယျပွီး နညေ့မရှေး ရုတျတရကျကိုယျပူလာတတျပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက ကိုယျပူကဆြေးဆိုရငျ ဆေးအခဲ၊ ဆေးအရညျနဲ့ ဂွိုဟျတုတောငျ့ကိုသာ သိကွတာမြားပါတယျ။ ဒီလိုအရညျ၊အခဲပုံစံတှအေပွငျ အပူကကြပျခှာဆိုတဲ့ အဖြားကစြတေဲ့ပလာစတာလေးတှလေညျးရှိပါသေးတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ Biogesic အဖြားပြောကျဆေးမှ Biogesic Cool Feel ဆိုတဲ့ ကိုယျပူကကြပျခှာကို စတငျပွီးမိတျဆကျလိုကျပါပွီ။
Biogesic Cool Feel ဆိုတာဘာလဲ?
ဘိုငျအိုဂကျြစဈကူးဖီး(လျ)ဆိုတာ United Pharma ကုမ်ပဏီ မှ ထုတျလုပျပွီး ကလေးလူကွီးမရှေး အသကျအရှယျစုံ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ ကိုယျပူကကြပျခှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဘိုငျအိုဂကျြစဈကူးဖီး(လျ) က ကိုယျပူကိုဘယျလိုကစြသေလဲ?
ဘိုငျအိုဂကျြစဈကူးဖီး(လျ)ရဲ့ ကိုယျပူကကြပျခှာလေးကို နဖူးပျေါမှာတငျကာ ကပျထားပေးခွငျးအားဖွငျ့ အပူတှကေို ကပျခှာမှစုပျယူကာ ခန်ဓာကိုယျကို အခြိနျတိုအတှငျးမှာ အပူကစြပေါတယျ။ အပူစုပျယူမှုနဲ့ ကပျအားကောငျးတဲ့ ဂယျြလျသားကိုအသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ အဖြားတကျတဲ့ကလေးငယျမြားအတှကျ အသုံးပွုရတာအဆငျပွစေပေါတယျ။ ကလေးလူကွီးမရှေး အသုံးပွုနိုငျတဲ့အရှယျအစားနဲ့ထုတျလုပျထားပွီး မိမိကလေးငယျရဲ့နဖူးအရှယျအစားနဲ့အညီ ဖွတျ၍လညျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အခြိနျမရှေး၊နရောမရှေး လှယျကူစှာအသုံးပွုနိုငျတဲ့အတှကျ ညမိုးခြုပျလို့ ကလေးငယျအိပျပြျောနခြေိနျမှာလညျး နှိုးစရာမလိုဘဲ နဖူးပျေါကပျပေးထားရုံနဲ့ ကိုယျပူသကျသာစနေိုငျပါတယျ။
ဘိုငျအိုဂကျြစဈကူးဖီး(လျ)အထုပျရဲ့ အပျေါထောငျ့ ဖွဲရနျနရောမှ လှယျကူစှာဆှဲဖွဲပါ။
Cool Feel Gelပွားကိုဆှဲထုတျပွီး အပျေါတှငျရှိသော ပလပျစတဈအကွညျကိုဖယျထုတျပါ။
ပွီးရငျတော့ နဖူး၊ ဂြိုငျး စတဲ့အပူခြိနျမြားတဲ့နရောမှာကပျပေးပါ။
ဒါဆိုရငျတော့ ဘိုငျအိုဂကျြစဈ ကိုယျပူကကြပျခှာက ခန်ဓာကိုယျရဲ့အပူတှကေို စုပျယူပဈပွီး ကိုယျပူကိုသကျသာစမှောပဲဖွဈပါတယျ။ ကိုယျပူကကြပျခှာကို ကလေး၏ မကျြစိ၊ နှာခေါငျးပေါကျတို့ကို တိုကျရိုကျထိတှမှေု့ မရှိစရေနျ ဂရုစိုကျ ကပျပေးရပါမယျ။ ကပျခှာတဈခုကိုတဈကွိမျသာအသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ အကာငျးဆုံးရလာဒျကိုရရှိနိုငျပါတယျ။
တဈခါတဈလမှော ကလေးငယျတှဟော အလှနျအမငျးအနျနတေဲ့အတှကျ အဖြားကဆြေးအခဲ၊အရညျတို့ကို တိုကျလို့မဝငျနိုငျအောငျ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဂွိုဟျတုတောငျ့ကို စအိုတှငျးထညျ့ခွငျးဟာလညျး ကလေးအတှကျအောငျ့သကျသကျဖွဈပွီး ရုနျးကနျငိုယိုနလေတေော့ ဘိုငျအိုဂကျြစဈအပူကကြပျခှာဟာ ကလေးငယျတို့အဖြားသကျသာစရော နညျးလမျးတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ ဘိုငျအိုဂကျြစဈကူးဖီး(လျ)ကပျခှာဟာ ဆေးမဟုတျပါ။ ကပျခှာကပျထားပွီး အဖြားကဆြေးတိုကျကြှေးခွငျးဖွငျ့ ပိုမိုလြှငျမွနျစှာ ကိုယျပူကစြပွေီး အဖြားတကျ၍ မှိနျးနသေော ကလေးငယျမြားကိုလညျး ပွနျလညျလနျးဆနျးစခွေငျးဖွငျ့ စိုးရိမျရခွငျးသောက ကငျးဝေးစရေနျ နညျးလမျးကောငျးဖွဈကွောငျး တငျပွပေးလိုကျပါတယျ ….
ကလေးငယ်တွေမှာ ရာသီဥတုအကူးအပြောင်းကာလတွေဟာဆိုရင် အပူအအေးပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်တဲ့အတွက် အအေးမိလွယ်ပြီး နေ့ညမရွေး ရုတ်တရက်ကိုယ်ပူလာတတ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက ကိုယ်ပူကျဆေးဆိုရင် ဆေးအခဲ၊ ဆေးအရည်နဲ့ ဂြိုဟ်တုတောင့်ကိုသာ သိကြတာများပါတယ်။ ဒီလိုအရည်၊အခဲပုံစံတွေအပြင် အပူကျကပ်ခွာဆိုတဲ့ အဖျားကျစေတဲ့ပလာစတာလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Biogesic အဖျားပျောက်ဆေးမှ Biogesic Cool Feel ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပူကျကပ်ခွာကို စတင်ပြီးမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
ဘိုင်အိုဂျက်စစ်ကူးဖီး(လ်)ဆိုတာ United Pharma ကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်လုပ်ပြီး ကလေးလူကြီးမရွေး အသက်အရွယ်စုံ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပူကျကပ်ခွာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုင်အိုဂျက်စစ်ကူးဖီး(လ်) က ကိုယ်ပူကိုဘယ်လိုကျစေသလဲ?
ဘိုင်အိုဂျက်စစ်ကူးဖီး(လ်)ရဲ့ ကိုယ်ပူကျကပ်ခွာလေးကို နဖူးပေါ်မှာတင်ကာ ကပ်ထားပေးခြင်းအားဖြင့် အပူတွေကို ကပ်ခွာမှစုပ်ယူကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ အပူကျစေပါတယ်။ အပူစုပ်ယူမှုနဲ့ ကပ်အားကောင်းတဲ့ ဂျယ်လ်သားကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အဖျားတက်တဲ့ကလေးငယ်များအတွက် အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ကလေးလူကြီးမရွေး အသုံးပြုနိုင်တဲ့အရွယ်အစားနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီး မိမိကလေးငယ်ရဲ့နဖူးအရွယ်အစားနဲ့အညီ ဖြတ်၍လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အချိန်မရွေး၊နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် ညမိုးချုပ်လို့ ကလေးငယ်အိပ်ပျော်နေချိန်မှာလည်း နှိုးစရာမလိုဘဲ နဖူးပေါ်ကပ်ပေးထားရုံနဲ့ ကိုယ်ပူသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဘိုင်အိုဂျက်စစ်ကူးဖီး(လ်)အထုပ်ရဲ့ အပေါ်ထောင့် ဖြဲရန်နေရာမှ လွယ်ကူစွာဆွဲဖြဲပါ။
Cool Feel Gelပြားကိုဆွဲထုတ်ပြီး အပေါ်တွင်ရှိသော ပလပ်စတစ်အကြည်ကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
ပြီးရင်တော့ နဖူး၊ ဂျိုင်း စတဲ့အပူချိန်များတဲ့နေရာမှာကပ်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ ဘိုင်အိုဂျက်စစ် ကိုယ်ပူကျကပ်ခွာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူတွေကို စုပ်ယူပစ်ပြီး ကိုယ်ပူကိုသက်သာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပူကျကပ်ခွာကို ကလေး၏ မျက်စိ၊ နှာခေါင်းပေါက်တို့ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု မရှိစေရန် ဂရုစိုက် ကပ်ပေးရပါမယ်။ ကပ်ခွာတစ်ခုကိုတစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အကာင်းဆုံးရလာဒ်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကလေးငယ်တွေဟာ အလွန်အမင်းအန်နေတဲ့အတွက် အဖျားကျဆေးအခဲ၊အရည်တို့ကို တိုက်လို့မဝင်နိုင်အောင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဂြိုဟ်တုတောင့်ကို စအိုတွင်းထည့်ခြင်းဟာလည်း ကလေးအတွက်အောင့်သက်သက်ဖြစ်ပြီး ရုန်းကန်ငိုယိုနေလေတော့ ဘိုင်အိုဂျက်စစ်အပူကျကပ်ခွာဟာ ကလေးငယ်တို့အဖျားသက်သာစေရာ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဘိုင်အိုဂျက်စစ်ကူးဖီး(လ်)ကပ်ခွာဟာ ဆေးမဟုတ်ပါ။ ကပ်ခွာကပ်ထားပြီး အဖျားကျဆေးတိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ ကိုယ်ပူကျစေပြီး အဖျားတက်၍ မှိန်းနေသော ကလေးငယ်များကိုလည်း ပြန်လည်လန်းဆန်းစေခြင်းဖြင့် စိုးရိမ်ရခြင်းသောက ကင်းဝေးစေရန် နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ….
Mole/Nevus (Part 3)
အရုပ် ပါ ပါ လား ရှင်
သားသားက g6pls def: